1.Used for batch sample amplification reaction reaction test, ingasetshenziswa eyodwa noma uhambo. Amashubhu we-CORBITION PCR enziwa kusuka ezingeni le-UPS yezokwelapha i-Polypropylene. Wonke amashubhu ayahambisana nepuleti elijwayelekile lama-96. Idizayini yodonga oluncane ukwenza ukudluliswa kokushisa kube ngcono. Tight uphawu cap ukuvimbela isampula ukuhwamuka. Amashubhu ayatholakala ngokuhlukahluka kwamandla okugcina amasampula ahlukile.
I-0.1 ml, i-0.2 ml, umucu owodwa no-8, imibala ebonakalayo futhi emhlophe, amakepisi ayizicaba namakepisi asemaceleni angaba yizinketho. Amapayipi ama-0.1 ml atholakala ngombala opaque wesiginali eyandisiwe ekuhloleni kwe-optical. Ishubhu le-PCR yimikhiqizo ekahle ye-PCR esheshayo nokuphendula ngevolumu ephansi. Onke amashubhu awanamalungu e-DNase, awanakho i-RNase, awanayo i-pyrogenic.
2.Inqubo yokulawula i-Octet PCR
Ikhwalithi yomkhiqizo ayinakwehlukaniswa nenqubo yokukhiqiza. Ubuchwepheshe bokukhiqiza obuthuthukisiwe nemishini yokunemba okuphezulu kuyisisekelo sekhwalithi yomkhiqizo. Isilingo se-PCR sinaka ngokukhethekile ukushuba kodonga lwezinto ze-PCR, futhi kudingeka ukufana kobukhulu bodonga obuncane futhi obufanayo ukuqinisekisa imodyuli yokushisa. Ukushisa kudluliselwe ngendlela efanayo kumasampula kuma-octuplets we-PCR ukufeza ukunemba kwemiphumela yokuhlola.
3, kukhanya ekukhanyeni,
Ngenxa yemvelo yamathuluzi we-PCR amaningi we-fluorescent, indlela elula idinga ukwenziwa ukusuka phezulu kokudlekayo kuze kube ngaphakathi kwebhubhu, ngakho-ke ukubonakala okusobala kokuthengiswayo kufanele kuphakame kakhulu.
4, ukubekwa uphawu
Ukusebenza kokufaka uphawu kwekhava yeshubhu nomzimba weshubhu kudinga ukuba kuhle kakhulu ukuvimbela isampula ukuhwamuka kuthubhu, ukugwema ukungcoliswa okuphambene, nokuqinisekisa ukunemba kwemiphumela yokuhlola!
5. Imvelo yokukhiqiza
Ngemishini emihle, indawo yokusebenzela ehlanzekile nayo ibaluleke kakhulu. Uma isampula lingcoliswe ngezinto ezingcolile, imiphumela izobe ingalungile kakhulu. Isizathu sophenyo sidla isikhathi futhi sisebenza kanzima. Ukulawulwa kwekhwalithi yokukhiqiza okuqinile kungaqinisekisa ukusebenza kweqoqo ngalinye lemikhiqizo. Kuzinzile ukuqinisekisa ukunemba nokuphindeka kwedatha yokuhlola
1.Selection of obala eliphezulu amazwe polypropylene impahla, akukho kwezulu.
Ayikho i-DNA noma i-RNA enzyme.
3.The ultra-mncane iyunifomu tube udonga kutholakala ngokunemba isikhunta design. I-ultra-thin tube tube wall inikeza umphumela omuhle kakhulu wokuqhuba ukushisa futhi ithuthukisa ukukhuliswa kwesampula yokukhulisa.
4.Vala ngokuqinile uvala ipayipi ukuvimbela ukungcoliswa.
Umkhiqizo ulungele izinsimbi eziningi ze-PCR ezibengezelayo.
6.Made kusuka UPS Plastic Class VI Polypropylene.
7.Compatible with standard 96 well plate
Udonga olungu-8.Ukudluliswa kokushisa okungcono Kutholakala ngombala ocacile nomhlophe, ikepisi eliyicaba kanye nophawu oluyingungu
9.Tight uphawu cap design ukuvimbela isampula ukuhwamuka
10.Sterile ukufinyelela ezingeni SAL 10-6
Cha. Incazelo Ivolumu I-Cap Incazelo Ukupakisha Inzalo
PC1001 I-PCR Tube 0.2ml Ifulethi noma iDome Ongashadile 20000 / Ctns ongakukhetha
PC0021 Umugqa we-PCR ongu-8 0.2ml Flat 8 Umucu 5000 / Ctns ongakukhetha
PC0050 Ishubhu encane ye-PCR 25ul Flat Ongashadile 12000 / Ctns ongakukhetha
PC0051 Umugqa we-PCR ongu-8 0.1ml Flat 8 Umucu 5000 / Ctns ongakukhetha
PC0059 Ishubhu le-PCR 0.1ml Flat Ongashadile 2500 / isikhwama noma 10000 / isikhwama ongakukhetha
Langaphambilini Amathiphu wepipette
Olandelayo: Ipuleti le-PCR
I-PC0021 0.2ml 8 strip strip ye-PCR
I-PC0050 25ul tube encane ye-PCR
I-PC0051 0.1ml 8 strip PCR tube
PC1001 0.2ml PCR tube isicaba & dome cap
I-Viral DNA / RNA Extraltion kit (Ikholomu)